Window Offline Update လုပ်ဆောင်ခြင်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ , ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ , အထွေထွေ » Window Offline Update လုပ်ဆောင်ခြင်း
By သန့်ဇင်ဌေး5:39 AM12 comments
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကိုရေးဖို့ စာတော်တော်လေး လိုက်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရင်က ကိုနိုးတူးမေးတဲ့ ပိုစ့်တပိုစ့်မှာ window update ပေးတာ Error တက်တာလေးကို ကျွန်တော် Offline လုပ်ဆောင်လို့ ရတယ်ဆိုရင် Offline Package တွေ ပေးခဲ့တယ် ။ အဲ့ကတည်းက ရှင်းပြဖို့ပါပဲ့။ ဘာကို ရှင်းပြချင်တာလည်းဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ မြန်မာ ဆိုဒ်တွေမှာ ဖတ်ဖူးမှာတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ထွက်သမျှ window Update တွေကို အင်တာနက်မရရင် ဘယ်လို ရနိုင်မလည်း ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရယ်။ နောက်တခုက ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ရတဲ့နေရာမှာ Window ကို တင်သွားမယ်။ ပြီးရင် Offline မှာ သုံးမယ်။ ဒါပေ့မယ် ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဒီ window ကို အသစ်ချိန်းချင်မှာပဲ့လေ။ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ် window update ကို Offline ကနေ ရနိုင်မလဲ့ အင်တာနက် မသုံးပဲ့ Update ဖိုင်တွေကို ဘယ်လို install လုပ်မလည်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကဲ့ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ စကြရအောင်… အဆင့်လိုက်သွားပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် အဆင့်လိုက်ပဲ့ ပြောချင်ပါတယ် ။ Step တွေ မများပါဘူး။
ပထမဆုံး ဒီအောက်က ဆိုဒ်ကို သွားရပါမယ်။ အဲ့မှာ နောက်ဆုံး Version ကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး Zip ဖြည်လိုက်ပါ။
Zip ဖြည်လို့ ရတဲ့ အထဲမှာ UpdateGenerator ဆိုတဲ့ Exe ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ အောက်ကလို ပုံလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့က window ဘယ် window ကို သုံးမယ်ဆိုတာကို စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီး Update Package တွေကိုပဲ့ ယူလိုရသလို အဲ့လို မဟုတ်လည်း XP .7,Sever ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နောင်တချိန် ကိုယ်သုံးမယ့် window ကို ရွေးပေးရပါမယ်။
အပေါ်က ပုံမှာ Create ISO Image ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲ့ အရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်လေး ပေးခဲ့ပါ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်မူ အပိုင်းကတော့ ပြီးပါပြီ ။ ဒါကြောင့် Start ကို စနိုပ်လိုက်တာနဲ့ သူ့ဘာသာ လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကြာတာတော့ ကြာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေ့မယ် ပြီးသွားတာနဲ့ အပေါ်မှာ Zip ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုင်ထဲ့က ISO ဆိုတဲ့ Folder လေးထဲ့မှာ ISO ဖိုင်လေးတွေရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို Window တင်ပြီး တာနဲ့ စက်က အင်တာနက် မရလည်း ရထားတဲ့ ISO ကို ရမ်းပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ် ISO လုပ်ထားတဲ့ နေ့ Update ရထားတဲ့ အထိ Update ကို ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်က အဆင့်တွေ အင်တာနက် ရမှ လုပ်ဆောင်လို့ ရမှာပါ။ဒါကြောင့် ဒီနေ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီနေ့အထိ Update ရမှာ ဖြစ်ပြီး.. တကယ်လို့ ဒီနေ့ လက်ရှိလုပ်ရမှာကို မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း. အင်တာနက် မရတော့တဲ့ အချိန်ကျမှ ဒီလို ခွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အင်တာနက်သုံးခွင့်ရတဲ့ သူဆီကနေ တဆင့် ISO ကို လုပ်ခိုင်းပြီးတောင်းဆိုရင် အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါဆို စက်မှာ အင်တာနက်မရလည်း ISO ဖိုင်လေး ရှိတာနဲ့ Update ရမှာပါ။
nainglin February 6, 2012 at 9:08 AM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အကို....ကျွန်တော် အကို့ ဆီကနေ ယူပြီးသုံးတာတွေ တော်တော်များနေပါပြီ...ကျေးဇူးနော်....ကျမ္မာပါစေ.....
lional February 6, 2012 at 12:19 PM
Unknown February 9, 2012 at 9:26 AM
thank u very very much bro.
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ အခုလို မသိနားမလည်တာလေးများကိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ရော၊ လိုအပ်တဲ့ toolsလေးတွေကိုပါတခါတည်း ဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာကိုပါပြောပြပေးတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
sexy man February 29, 2012 at 1:47 PM
Anonymous March 10, 2012 at 1:50 AM
lional March 13, 2012 at 1:36 PM
myint kyaing May 11, 2012 at 2:50 PM
အစ်ကို ကျွန်တော် ကူလိုက်တဲ့ဟာက window update 7.2 generator ဖြစ်နေတယ်အစ်ကို အစ်ကိုပြောတဲ့
create ISO image ဆိုတာလဲမတွေ့ဘူးအစ်ကို ပြန်ပြောပြပါလားအစ်ကို သိတဲ့လူများရှိရင်လဲကျွန်တော်ကို ကူညီ
phoenix June 6, 2012 at 11:36 PM
thanks bro... really
ဒီဆိုဒ်လေးက တော်တော် လေးလဲစုံတယ် ဗဟုသုတ လေးတွေလဲ အများကြီးရပါတယ်။ကျေးဇူးလဲ အများ ကြီးတင်ပါတယ်။
ko February 17, 2014 at 10:41 PM
ကိုနေမင်းမောင် အတွက် အားဆေးတစ်ခွက် ကျွန်တော် ထပ်ဖြည့် ပေးလိုက်ပါတယ် (Thank)